GARBAHAAREEY ONLINE » Taageer Musharax Cabdiqaadir Maxamed Cadde
Taageer Musharax Cabdiqaadir Maxamed Cadde
Jul 31, 2016 - jawaab
Post Views = 984
Cabdiqaadir Maxamed Cadde oo u taagan qabashada xilka Xildhibaanimo ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee 2016 ayaa kulan wada tashi ah la qaatay dhalinta waxbaratay ee ka soo jeeddda beesha awradeen ee ka tirsan beesha Maxamuud Hiraab.
Kulanka oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimahay ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirka biyaha iyo Korontada ee Galmudug Mudane Cawil Xirsi Xasan Goladiid, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Haweenka ee Galmudug Mudane Cabdiweli Cismaan Cabdi, qeybaha bulshada iyo dhallinyarada wax baratay.
Maxamed Axmed Cali oo ka mid ah dhalintii ka qeyb gashay kulanka ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin kulanka ay la qaateen C/qaadir Maxamed Cadde, waxaana uu intaa ku daray inay taageersan yihiin, loona baahanyahay in uu yimaado isbadal sida dhallinta wax baratay ee ay helaan fursado ay kaga qeyb qaataan hogaanka dalka.
Xasan Saciid Cali Gaban oo isna kulanka hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ay gacan ku siinayaan sidii uu ku heli lahaa xilka uu u sharaxan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cadde, isagoona balan qaaday inay u fuulayaan geed dheer iyo geed gaaban intuba, loona baahan yahay aqoonyahan isaga oo kale.
Eng, C/nuur Cali Bood ayaa xusay in ay mar waliba garab taagan yihiin, Cabdiqaadir Maxamed Cadde waxaana uu tilmaamay in la gaaray waqtigii dhalinyarada waxbaratay xilka loo dhiibi lahaa, loona baahan yahay isbadal muuqdo, maadaama C/qaadir uu yahay aqoonyahan da’yar, kana soo bixi kara howlkasta oo loo wakiisho.
Mahad Salaad Tarabi ayaa odoyaasha dhaqanka ka codsaday inay codkooda ku biiriyaan kan dhallinyarada beesha Awradeen oo iyagu u gartay in C/qaadir Maxamed Cadde uu yahay shaqsi ka soo bixi kara xilka uu u sharaxan yahay.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Haweenka Galmudug Cabdiweli Cismaan Cabdi (C/weli Shancad) ayaa tilmaamay in uu soo dhaweynayo musharax Cabdiqaadir, uuna gacan ka geysan doono sidii uu taageero uga geysan lahaa, odoyaasha dhaqankuna ay codkooda si sharuud la’aan ku siiyaan wuxuu intaa sii raaciyey “waxaan aaminsanahay sanadkaan in ay tahay sanadkii dhalinyarada aan tiaabino dhalnyarada.”
Musharax Cabdiqaadir Maxamed Cadde oo kulanka wadatashiga soo xiray ayaa uga mahadceliyay sida ay uga soo qeyb galeen kulanka, waxaana uu balan qaaday in uu wax badan u qaban doono dhallinta waxbaratay marka uu ku guuleysto xilka uu u taagan yahay, waxaana uu intaa ku daray in uu qaadan doono aaraahda ay soo jeediyeen wuxuu intaa sii raaciyey “Waxaan diyaar u ahay isbedel odoyaasha dhalinyarada,Haweenka dhamaantood waxaan ka codsanayaa in ay I doortaan si aan uga dhaqaaqno maanta meesha aan joogno”.
Ma ahan markii ugu horeysay uu Musharax C/qaadir Maxamed Cadde qabto kulamo uu ku soo bandhigayo in uu yahay musharax u taagan xilka baarlamaanka.